Version 0.6.0 – Uga socday dhakhso ah si dhakhso
July 29, 2010 by dalabyo 6 Comments
ku jiray laakiin hadda dhaqso
Version Tani waa sii daayo weyn ka, oo waxaa jira waxyaabo badan oo walax cusub ee loo sii daayo this. isla markaana kombuyuutarka ku heli weyn liiska alaabta
Hadda waxaa jira taageero for translations auto Dufcaddii taas oo ka dhigaysa translations dheereysa oo soo hagaagaysa ka waayo-aragnimo user, hore u Transposh leeyahay in uu ku shuban qoraallada ka soo backends turjumaad auto kala duwan ka dibna iterate lahaa on dhambaal mid mid si aad u hesho translations, hadda dadka la isugu raaciyaa yaraynta tirada codsiyada lagu sameeyo, xaqiiqada ah in qoraallada dibadda yihiin loading yaraynaysaa dhibka ay hagaajinaysaa xawaaraha.
MSN (Bing) turjumaan uusan dib dambe u baahan fure, sida ay casriyeeyay ay API iyo wareegeen isticmaalaya furaha ah codsi, aad hadda uun dooran kartaa engine turjumaad default ee xagga doonista, haddii engine this aan la heli karin, waayo luqadda in – Transposh raadsano doonaan in ay la isticmaalayo mid ka mid kale.
Google badalka Transposh waxaa hadda ka mid ah si ay awood ugu turjumaad luqado heerka Alpha ka soo Google (qaba 5 luqado cusub taageereen – Armenian, Azerbaijan, Basque, Joorijiyaan iyo Urduu) – wakiil this waxa uu ku yaalaa gudaha plugin iyo codsiyada redirects si google translate aad ka server jidaynayey script si ay iyaga u isticmaali. Habkani waa u gaabiyaa – kordhiyaa load ku on your server – iyo guud ahaan ma aha mid aad u lagula talinayaa, iyo in la ciribtiray doonaa sida ugu dhakhsaha badan Google sii deynayso luqado kuwa la isticmaalo guud. Laakiin haddii aad leedahay deg-deg ah si loo turjumi aad site in ay dadka bustayaal, ee u baahan, ugu yaraan aad samayn karto in.
The logo Transposh iyo Backlink hadda laga saari karo widget, haddii aad doorato doorashadan – Transposh isku dayi doono inuu sameeyo lacag qaar ka mid ah meel bannaan oo ad jira bogagga laguu turjumo oo kaliya, lacagtan na caawin doonaa in aannu dadaalka horumarinta, haddii aadan rabin in la lumiyo wax lacag ah ka soo xayasiiska aad, kaliya hayn link. Ereyadu waxa ay yihiin la akhrin karo halkan.
The turjumi badhanka oo dhan ayaa sidoo kale wax bareen, iyo waa in la-deg ah la isticmaalayo batching.
Share caadiga ah Ciidamada Kumandoska kutaan halkan waa, iyo waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad Rogelio iyo Marko for comments iyo waxqabadka xeeldheer ay si qamaar loogu cayayaanka kuwa. Isku day la sameeyey at qalad plugin header ah, laakiin sida aynu u ma soo saari karno garan mayno haddii uu u shaqeeyo, sidaas gudbaya Faraha our. Haddii loo sii daayo tan waxaa si xun loo jebiyey kuu, fadlan wargeli at halkan comments ee, abuuro tigidhada inoo in our trac. Mat noo on our Twitter ama our facebook page ama adiga oo waca taleefanka gacanta our, doorbidayaa at 3 at the. Waxaad had iyo jeer kusoo celin karaa si version hore, waxaan aan la xumaanin.
Filed Under: Shaaciyaan Release, Software Updates Tagged Iyadoo: Bing (msn) turjumaan, ugu waaweyn, luqado badan oo, sii daayo, uqaadineed xawaaraha, plugin wordpress